नेयमार वा काभानी : पिएसजीको पेनाल्टी कसले लिँदा ठिक ? | Hamro Khelkud
नेयमार वा काभानी : पिएसजीको पेनाल्टी कसले लिँदा ठिक ?
पेरिस (एजेन्सी) – लिग वानमा आइतबार लियोन विरुद्धको २–० जितमा पेरिस सेन्ट जर्मन (पिएसजी) का तर्फबाट पेनाल्टी नेयमार र एडिन्सन काभानीमध्ये कसले हान्ने भन्ने विवाद सिर्जना भएको थियो । अन्तिममा काभानीले त्यो पेनाल्टी लिए, तर उनी त्यसमा गोल गर्नबाट चुके ।
पेनाल्टीले खेल नै उल्ट्याउन सक्ने भएकोले यसलाई फुटबल खेलको निकै महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । अझ पिएसजी जस्तो छिटो गतिमा खेल्ने टोलीविरुद्ध धेरै फाउल हुने हुँदा पेनाल्टी पाउने सम्भावना अझ बढ्दो हुने गर्छ । केही वर्षयता काभानी पिएसजीमा काभानी पेनाल्टी हान्ने पहिलो रोजाईमा छन् ।
पिएसजीबाट उनले लिएका २० पेनाल्टीमध्ये १७ वटा प्रहारले जाली चुमेको छ । आइतबारको पेनाल्टीसहित उनी ३ वटामा चुकेका छन् । खेल जीवनभर उनले लिएका ४७ पेनाल्टीमा उनी केवल ११ वटामा चुकेका छन् । उनी आफ्ना पूर्व क्लब नेपोली र उरुग्वेको राष्ट्रिय टोलीका पनि पहिलो रोजाईकै पेनाल्टीकर्ता हुन् ।
नेयमारले भने बार्सिलोना हुँदा लियोनल मेस्सीसँग पेनाल्टीको जिम्मेवारी बाँड्ने गर्थे । गत सिजन उनले बार्सिलोनाबाट ५ पेनाल्टी हान्न पाएका थिए । त्यसमा उनले ४ लाई गोलमा परिणत गर्न सफल भएका थिए । यसैगरी उनी म्यानचेस्टर विरुद्धको च्याम्पियन्स लिगको खेलमा भने पेनाल्टीमा चुकेका थिए ।
नेयमारले खेल जीवनमा ४० पेनाल्टी लिएका छन्, जसमा उनी केवल ८ वटामा चुकेका छन् । २०१४÷१५ को सिजनमा बार्सिलोना भित्रिएका नेयमारले त्यहाँ हुँदा लिएका १८ मध्ये १२ पेनाल्टीलाई गोलमा परिणत गर्न सफल भएका थिए । तथ्याङ्क हेर्दा दुवै नेयमार र काभानी पेनाल्टीमा गोल गर्न उत्तिकै दक्ष छन् ।
पिएसजीका प्रशिक्षक उनाई इर्मीले समेत यो विषयमा बोलिसकेका छन् । आपसी सहमतिलाई प्राथमिकता दिएको तर चाहिए आफैँले सो निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने उनले प्रष्ट पारिसकेका छन् । त्यसैले सिजनभरी पाउने कैंयौँ पटक पाउने सम्भावना भएको पेनाल्टीको जिम्मेवारी काभानी र नेयमारले एकआपसमा बाँड्दा व्यक्तिगत रुपमा र टोलीको एकता दुवैको लागि उत्तम हुने देखिन्छ ।